OTU ESI EDOZI TEAMSPEAK 3 - TEAMSPEAK - 2019
Ịhazi Ntọala TeamSpeak
Iji malite usoro nhazi, ịkwesiri ịga na nhọrọ kwesịrị ekwesị, site na ebe a niile ga-adị nnọọ mfe ịrụ ọrụ. Iji mee nke a, ịkwesịrị ịmalite ngwa TimSpik ma gaa na taabụ "Ngwaọrụ"wee pịa "Nhọrọ".
Ugbu a ị nwere oghere imeghe, nke a na-ekewa n'ime ọtụtụ taabụ, nke ọ bụla n'ime ha bụ ọrụ maka ịtọ ntọala ụfọdụ. Ka anyị lee anya na nke ọ bụla n'ime taabụ ndị a n'ụzọ zuru ezu karị.
Akpa taabụ nke ị nwetara mgbe ịbanye na njedebe bụ ntọala izugbe. N'ebe a, ị nwere ike ịmara onwe gị na ntọala dị otú ahụ:
Server. Ị nwere ọtụtụ nhọrọ maka edezi. Ị nwere ike ịhazi igwe okwu ka ịgbanwuo mgbe ị na-agbanwe n'etiti sava, megharịa sava mgbe usoro ahụ na-ahapụ ọnọdụ nọrọ na njikere, na-edozi aha aha ahụ na taabụ, ma jiri wiil òké iji kpoo osisi nkesa.
Ndị ọzọ. Ntọala ndị a ga-eme ka ọ dịkwuo mfe iji usoro a. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịhazi TimSpik iji gosi mgbe niile na windo niile ma ọ bụ ka a ga-arụ ọrụ mgbe usoro sistemụ gị malitere.
Asụsụ. Na mpaghara nke a, ị nwere ike ịhazi asụsụ nke a ga-egosipụta usoro ihe omume ahụ. N'oge na-adịbeghị anya, ịnweta bụ nanị asụsụ ole na ole, ma ka oge na-aga, ha na-adịkwuwanye. Ejikwara asụsụ Russian, nke ị nwere ike iji.
Nke a bụ isi ihe ịchọrọ ịma banyere ngalaba ahụ na ntọala izugbe nke ngwa ahụ. Anyị na-aga n'ihu.
Na mpaghara a, ịnwere ike idezi profaịlụ onwe gị na ngwa a. Ị nwere ike ịbanye na akaụntụ gị, gbanwee paswọọdụ gị, gbanwee aha njirimara gị, ma melite mmekọrịta. Biko rịba ama na ị nwere ike nweta ọkwa mgbake ọhụrụ ma ọ bụrụ na agadi ahụ furu efu.
Jụọ na Dekọọ
Na taabụ na ntọala nhazi, ị nwere ike ịgbanwe olu olu dị iche na ụda ndị ọzọ, nke bụ ihe ngwọta dị mma. I nwekwara ike ige nti ule ahụ iji nyochaa mma olu. Ọ bụrụ na ị na-eji usoro ihe omume ahụ maka ebumnuche dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, iji kwurịta okwu na egwuregwu, ma mgbe ụfọdụ maka mkparịta ụka mgbe niile, mgbe ahụ i nwere ike itinye profaịlụ gị ka ịgbanwee n'etiti ha ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Tinye profaịlụ na-emetụta ngalaba "Dekọọ". N'ebe a, ị nwere ike ịmegharị igwe okwu, nwalee ya, họrọ bọtịnụ nke ga-abụ ọrụ maka igbanwe ya ma gbanyụọ. Ihe dị na ya bụ mmetụta nke nkwụsịtụ nchoghachi na ntọala ndị ọzọ, nke gụnyere iwepụ ụda mkpọtụ, njikwa olu na igbu oge mgbe ị hapụrụ mkpịsị ugodi.
Ihe niile metụtara mpaghara ihe ngosi nke interface ahụ, ị ​​nwere ike ịchọta na mpaghara a. Otutu ngwugwu ga-enyere gị aka ịgbanwe usoro ihe omume ahụ n'onwe gị. Ụdị dị iche iche na akara ngosi ndị nwekwara ike ibudata na Ịntanetị, ịmepụta osisi olulu, nkwado maka faịlụ GIF animated - ihe a nile ị nwere ike ịchọta ma dezie na taabụ a.
Na mpaghara a, ị nwere ike ijikwa plugins nke arụnyere na mbụ. Nke a na-emetụta isiokwu dịgasị iche iche, ngwugwu asụsụ, tinye-ons maka ịrụ ọrụ dị iche iche. Enwere ike ịchọta ihe ntanetị na ụdị ọzọ dị iche iche na Ịntanetị ma ọ bụ na engine engine-arụnyere, nke dị na taabụ a.
Akụkụ dị mma ma ọ bụrụ na ị na-eji usoro ihe a eme ọtụtụ mgbe. Ọ bụrụ na ị ghaghị ịmegharị ọtụtụ ntanetị na taabụ na ọbụna tinyekwuo ya na òké ahụ, wee site na ịtọye mkpụrụedemede na menu kpọmkwem, ị ga-enweta ebe ahụ naanị otu pịa. Ka anyị nyochaa ụkpụrụ nke ịgbakwunye isi ihe dị ọkụ:
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji njikọ dịgasị iche maka nzube dị iche iche, wee jiri ojiji nke ọtụtụ profaịlụ mee ka ọ dịkwuo mfe. Naanị pịa bọtịnụ ndị ọzọ, nke dị n'okpuru window profaịlụ. Họrọ aha profaịlụ ma mee ya site na iji ntọala ndabara ma ọ bụ detuo profaịlụ site na profaịlụ ọzọ.
Ugbu a, ịnwere ike pịa ya "Tinye" na ala na window nke igodo ọkụ ma họrọ ihe ịchọrọ ịnye igodo.
Ugbu a, ekenyela igodo dị ọkụ, ma ị nwere ike ịgbanwe ma ọ bụ hichapụ ya n'oge ọ bụla.
Nkebi nke a na-ejikọta ozi ogbi ị nwetara ma ọ bụ zipu. N'ebe a, ị nwere ike iwepu ikike izipu otu ozi ndị a n'aka gị, ma debe ihe nnata ha, dịka ọmụmaatụ, gosi akụkọ ihe mere eme ha ma ọ bụ ụda mgbe a nabatara ha.
TeamSpeak nwere ike ịkekọrịta faịlụ. Na taabụ a, ị nwere ike hazie nhọrọ nbudata. Ị nwere ike ịhọrọ nchekwa ebe a ga-ebudata faịlụ ndị dị mkpa na-akpaghị aka, gbanwee ọnụ ọgụgụ nke ebudatara n'otu oge ahụ. Ịnwekwara ike ịhazi nbudata na bulite ọsọ, ọdịdị anya, dịka ọmụmaatụ, windo dị iche nke a ga-egosipụta ọkwa faịlụ.
N'ebe a, ị nwere ike ịhazi nkwarịta nhọrọ. Ebe ọ bụ na ọ bụghị mmadụ nile na-enwe afọ ojuju na windo ma ọ bụ nkata, a na-enye gị ohere imezi ihe a niile. Dịka ọmụmaatụ, mee nnukwu font ma ọ bụ gbanwee ya, nyefee ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke a ga-egosipụta na nkata ahụ, gbanwee akara aha nkata na-abata ma mezie ọdebe bipụtaghachi.
Na teabụ a, ị nwere ike idezi ịchekwaa okwuntughe maka ọwa na sava na hazie ịmecha cache, nke a ga-eme na npụpụ, ma ọ bụrụ na akọwapụtara na mpaghara a nke ntọala.
Na mpaghara a ị nwere ike ịhazi ozi. Dozie ha, wee dezie ụdị ozi.
N'ebe a, ị nwere ike ịhazi ụdị edemede niile. Ọtụtụ ọkwa na mmemme a na-agwa gị site na ụda ụda olu, nke ị nwere ike ịgbanwe, gbanyụọ ma ọ bụ gee ntị nyocha. Biko mara na na ngalaba Addons Ị nwere ike ịchọta na ibudata nchịkọta nchịkọta ọhụrụ ma ọ bụrụ na afọghị gị afọ.
Ndị a bụ ntọala niile nke TeamSpeak ahịa m ga-achọ ịkọ. Ekele maka usoro dị iche iche ị nwere ike iji mee ka usoro ihe a dịkwuo mfe.